ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဲ့ သန္တိသုခ ပီတိရပုံ | Myanmar My Always
← ရဟန်းဝတ်ရင် ရဟန်းပီစေချင်
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဒီမိုကရေစီကျင့်ထုံးကို လိုက်နာပြပါ” →
“There is no fire like lust. There is no evil like hate. There is no pain like disharmony. There is no joy like NIRVANA.” (The Buddha, the Dhammapada, 15, 202).
ဒီနေ့မနက် နန်းနဲ့ကဗျာချစ်သူတွေအတွက် ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မြန်မာကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့ အင်္ဂလိပ် အဆိုတစ်ခုကို လက်ဆောင်ပါးချင်ပါတယ်။ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ရင် အဓိကဆင်းရဲရတာ ခံစားရတာက ကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိမမူမိသူကများပါတယ်။ သတိလေး ရှိစေချင်လို့ပါ၊ ဗုဒ္ဓဝါဒီ ပိုပြီးပီသစေချင်လို့ပါ။ ကဲ မြည်းစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျား၊
လောဘအဆိပ်၊ ကိုယ် နှုတ် စိတ်ဖြင့်
ဒေါသအဆိပ်၊ ကိုယ် နှုတ် စိတ်ဖြင့်
မောဟအဆိပ်၊ ကိုယ် နှုတ်စိတ်ဖြင့်
ကြည့်လေ၊ နောက်ဆုံးအပိုဒ်မှာ “ကျွန်ုပ်ခွင့်လွှတ်မှ” ဘဝအေးချမ်းပြီး ကောင်းစွာအိပ်စက်နိုင်မယ်တဲ့။ ဒါ မေတ္တာရဲ့အကျိုး ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးပါပဲ။ ရှင်တော်ဗုဒ္ဓကတော့ သူ့နောက်လိုက်သံဃာတွေကို မုန်းသူ မချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူ သူခိုးထားပြတွေက နှစ်ဖက်လွှနဲ့ ခြေလက်တွေကို အပိုင်းပိုင်းလှီးနေခိုက်မှာတောင် စိတ်မကွက်ရဘူး၊ စိတ်ကွက်တဲ့သူ ငါ့နောက်လိုက်မဟုတ်ဘူးလို့ နှစ်ဖက်လွှသုတ်မှာ ဟောထားခဲ့တယ်ဗျာ။
ဟော၊ ကျနော် လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်နီးပါးက စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်က Why Forgive? ဘာကြောင့် ခွင့်လွှတ်ရမှာလဲ ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကို ဝယ်ခဲ့တယ်ဗျ၊ အဲဒီစာအုပ်ကို အဆိုလေးတစ်ခုနဲ့စပြီးဖွင့်ထားပါတယ်။ အဲဒါလေးကတော့၊
“This isahard law . . . . .
“ဟောဒါက ခိုင်ခန့်ကျစ်မာတဲ့ သဘာဝနိယမဖြစ်တယ်၊
ကျွန်ုပ်တို့က ခွှင့်မလွှတ်သေးသမျှ ဘယ်တော့မှ ဒဏ်ရာမကျက်ဘူး။”
ကျနော်ဝယ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီစာအုပ်ကလေးထဲမှာတော့ အဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့ဟာ တရားခံနဲ့ တရားလိုတွေကြားမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာဃာတမထားပဲ ခွင့်လွှတ်ကျေအေးဖို့ လွန်းထိုး စကားပြောကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တရားဥပဒေအရ အပြစ်ပေးတာကို ခွင့်လွှတ်ဖို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ တရားဥပဒေကိစ္စကို သူတို့ မစွက်ဖက်ပါဘူး။ တချို့ဆိုရင် ကြိုးပေးခံရဆဲဆဲလဲပါတယ်၊ လျှပ်စစ်ကုလားထိုင်ပေါ်တက်ရမဲ့သူလဲ ပါပါတယ်။ အဲဒီလိုလူတွေကလဲပဲ သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တာ မှားပါတယ်၊ ခွင့်လွှတ်ပါလို့တောင်းပန်အောင်၊ ခံရတဲ့မိသားစုဖက်ကလဲ ခွင့်လွှတ်ပါတယ်လို့ပြောနိုင်အောင် ခရစ်တော်ရဲ့သင်ကြားချက်အတိုင်း ချဉ်းကပ်စည်းရုံးတာပါ။ တချို့ခံရတဲ့မိသားစုဆိုရင် သေဒဏ်မစီရင် ထောင်ဝင်စာတွေ့ပြီး ဘဝကူးကောင်းအောင် ကူညီကြပါတယ်။
ကျနော်တို့က ကမ္ဘာမှာ အမြင့်မြတ်ဆုံးလို့ ကိုယ့်ဖာသာယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ မဟုတ်ပါလား။ ဒါဆိုရင် ဗုဒ္ဓစကားကို နားထောင်ပြီး အကျိတ်အခဲထားခဲ့သူတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ် ထိခိုက်စေခဲ့တဲ့သူတွေကို ကိုယ်ကစပြီး ခွင့်လွှတ်သင့်တယ်မဟုတ်ပါလား။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် အကောင်းဆုံးခံစားရတာ ပီတိသုခနဲ့နေရတာဟာ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်သားလဲ တူညီတဲ့ခံစားမှု တုန့်ပြန်မှုတွေနဲ့ အားလုံး စိတ်ချမ်းသာကြရတဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ နေပျော်တဲ့လောကကို အတူဖန်တီးနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသေအချာစဉ်းစားလေ သွေးထွက်အောင်မှန်လေပဲ မဟုတ်ပါလား။
နန်းနဲ့ ကဗျာချစ်သူအားလုံး ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြပါစေ၊ ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ၊